आफ्ना प्रतिज्ञाहरू राख्नुहोस् | Martech Zone
बिहीबार, नोभेम्बर ०,, २०२० बुधबार, फेब्रुअरी 10, 2016 Douglas Karr
एक दिन अर्को साथीले मलाई एक कथा सुनाइरहेको थियो। उनी महसुस गर्छिन् कि उनी एक कम्पनीले जलाइन् कि उनी व्यापार गर्छिन् र यसको बारे अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। धेरै महिना अघि, जब सम्बन्ध सुरू भयो, तिनीहरू बसे र उनीहरू सँगै कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा सहमति जनाए, के गर्ने र कहिले के गर्ने भन्ने रूपरेखा। पहिले सुरुमा धेरै राम्रा देखिन्थे। तर हनीमून चरण लगाउन थालेपछि उनले संकेतहरू देखे जुन सबै छलफल गरिएको थिएन।
वास्तवमा, अर्को कम्पनीले उनीहरूले गरेको विशेष प्रतिज्ञाहरू पालन गरिरहेको थिएन। उनले उनीहरुसँग उनको सरोकारलाई सम्बोधन गरे र उनीहरूले यो फेरि हुन नदिने, ट्र्याकमा राख्न वचन दिए। म निश्चिन्त छु कि तपाई यो देखी सक्नु हुन्छ। भर्खर तिनीहरूले यो फेरि गरे 'र यस पटक ठूलो तरिकामा। तिनीहरू एक निश्चित तरिकामा परिस्थितिमा पुग्न सहमत भए र उनीहरूको एक जना पूर्ण र जानबुझाइले उडायो। उनी ब्यापारबाट टाढा गई।
यसको मार्केटिंगसँग के गर्नुपर्दछ? सबै
तपाईं केहि गर्नुहुन्छ मार्केटिंग
केवल तपाईंको विज्ञापनहरू र तपाईंको ब्लग पोष्टहरू र तपाईंको वेबसाइटहरू र तपाईंको बिक्री पिचहरू मात्र होईन। सबै र जब तपाईं स्पष्ट वा स्पष्ट प्रतिज्ञाहरू गर्नुहुन्छ, तपाईं कसैलाई विश्वास गर्न भनिरहेका हुनुहुन्छ। यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ, तिनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो विश्वास प्रदान गर्नेछन्। यदि तपाईं आफ्ना प्रतिज्ञाहरू समर्थन गर्दैनन्, तपाईं तिनीहरूको भरोसा गुमाउनुहुनेछ। यो सजिलो छ।
यदि तपाइँ सly्केत गर्नुहुन्छ कि तपाइँको उत्पादन छिटो छ, यो उत्तम छिटो हुन्छ। यदि तपाईं २ calls घण्टामा कलहरूको जवाफ दिनुहुन्छ भने, तपाईं २ answer घण्टामा अझ राम्रो उत्तरहरू दिन चाहानुहुन्छ। कुनै ifs, र हरू, वा बुटहरू छैनन्। मानिसहरू क्षमा दिन सकिन्छ। तपाईं गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले हराउनु भएको विश्वासको त्यो बिट तपाईंले कमाउनुपर्नेछ।
तर तपाई जानाजानी धोका दिन सक्नुहुन्न। अनुमति छैन। तपाईं के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् र त्यसपछि यो गर्नुहोस्। आमा सधैं भन्नुहुन्थ्यो,
यदि तपाईंले एक वचन गर्नुभयो भने, त्यसलाई राख्नुहोस्।
कसलाई थाहा थियो कि उनी पनि व्यापारको बारेमा कुरा गर्दै थिईन्।
"तपाईले गर्नु भएको सबै मार्केटिंग हो"। तपाईंले यो वाक्यको साथ यसलाई नailed गर्नुभयो। जब तपाईं उठ्नुहुन्छ र आफूलाई ऐनामा आफूलाई हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ मार्केटिंग पनि सामेल छ: तपाईं आफैंमा आफैलाई बेच्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं थाकेको देखिनुहुन्छ भने, तपाईं थाकेको महसुस गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं उत्साहित देखिनुहुन्छ, ओ केटा, बाहिर हेर्नुहोस्! यो एक महान दिन हुन गइरहेको छ! धन्यवाद निला। Aपउल
नोभेम्बर,, २०१ at 13::2009 बिहान
करिब १० बर्ष अघि मेरो मनपर्ने बिक्री मान्छेले मलाई यसो भन्यो: तपाईलाई विश्वास गर्नु अघि तपाईले एक ग्राहकलाई १००० पटक सत्य भन्नुपर्दछ तर यदि तपाईले यो एक चोटि पनि हराउनु भयो भने तिनीहरुले तपाईलाई फेरि विश्वास गर्ने छैनन्। यदि तपाइँ यसो भन्नुहुन्छ, यो गर्नुहोस्।
तपाईं ठिक हुनुहुन्छ! मैले केहि कम्पनीहरूसँग काम गरें जसले बिक्री टोलीहरू लिएका थिए जसका लागि महान् नतिजाका प्रतिज्ञाहरूसहितका मानिसहरू सजिलै चुसाउँथे - कि उनीहरू जान्थे कि उनीहरू भेट्न सक्दैनन्। समस्या केवल बिक्री र मार्केटिंग समस्या थिएन, यो अझ गहिरो थियो किनकि यसले ग्राहक समर्थन र खाता व्यवस्थापन स्टाफलाई असर गरेको थियो। अपेक्षाहरू सेट गर्नु भन्दा डरलाग्दो केहि छैन जुन तपाईंले प्रतिबद्ध गर्नु हुँदैन!
अति उत्तम पोष्ट! धन्यवाद को साझा को लागी!
नोभेम्बर २०, २००। 13::2009 अपराह्न
सम्झनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा परिवर्तनको अवधारणा हो। यदि तपाईंले केहि गलत गर्नुभयो भने यसलाई ठीक गर्नुहोस् र फेरि कहिल्यै गल्ती नगर्ने प्रयास गर्नुहोस्।